Porn စွဲသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ် - အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည် (2011) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Porn စွဲသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ် - ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း (၂၀၁၁)
Gabe Deem မှဗီဒီယို -porn စွဲလိင်စွဲလမ်းမဟုတ်ပါ: ခါးပန်းညီလာခံ, 2015
UPDATE (2018): လေ့လာမှုကိုတွေ့ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြားပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားခြားနားချက်များနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း (လိင်စွဲလမ်းမှု) မှသီးခြားခွဲထုတ်သင့်သလားကိုသုတေသီများကစဉ်းစားသည်။ တဦးတည်းကိစ္စ [ဒီလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်] Impulse နှင့် compulsive နှင့်အတူဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတွေးဆကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု hypersexuality တစ် SUBCATEGORY ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ပြဿနာ-ရာ၏ထီးအောက်မှာပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) အကောင်းဆုံးခွဲခြားစေခြင်းငှါဘယ်လို hypersexuality-ဖြစ်ပါတယ်။
UPDATE (2018) သုတေသီများအဆိုပြု "လိင်စွဲလမ်းသူများ" နှင့် "စွဲလမ်းသူများ" နှင့်ခွဲခြားရန်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအခြေခံအယူအဆ: မြင်သာထင်သာပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်မျိုးကွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်စဉ်ကျွန်တော်တို့သည် RDS နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့မျိုးကွဲအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့် ventral striatal hypoactivity တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ဆနျးစစျဖို့အဆိုပြု အစားခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ hypoactivation မပါဘဲဆုလာဘ်များအတွက်တိုးမြှင့ ventral striatal reactivity ကိုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
UPDATE (2022) လေ့လာမှုကိုတွေ့ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများနှင့် လိင်စွဲလမ်းသူများကြား ကွာခြားချက်များ- “OCSB နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ [ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသူများ] OCSB မဟုတ်သောလူနာများ [လိင်စွဲသူများ]ရလဒ်များအရ OCSB မဟုတ်သောလူနာများသည် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအဖြစ်များပြီး၊ လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် လိင်တူဆက်ဆံမှုရာခိုင်နှုန်း ပိုများပြီး စိုးရိမ်စိတ်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှု ပျက်ကွက်မှုတွင် ရမှတ်ပိုများကြောင်း ရလဒ်များက ပြသခဲ့သည်။”
ဆောငျးပါး: လိင်စွဲလမ်းအစစ်အမှန်လူတွေလိုအပ်တယ်; porn စွဲနေတဲ့မျက်နှာပြင်လိုအပ်ပါတယ်
Sex စွဲလမ်းမှုအောက်တွင် 'အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှု' နှင့် 'လိင်စွဲလမ်းမှု' ကိုခွဲခြားထားခြင်းထီးသည်ယခင်လိင်မှုဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမှာအလွန်ရှားပါးသောကြောင့်ယခင်ကမမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအားမှားယွင်းစွာရှာဖွေလေ့ရှိပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ထိရောက်မှုမရှိသောကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူငယ်မဟုတ်သောကျန်းမာသန်စွမ်းသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများသည် erectile disfunction နှင့်အတူ အဆိုပါ porn ကိုချွတ် lay မှမူးယစ်ဆေးဝါးများအစားအကြံဉာဏ်ကိုပေးအပ်ထားတယ်။ အခြားသူများကစိတ်ကျရောဂါ, အခြိနျဆှဲသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများအစားမိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏အမြစ်မှာအိပ်စေခြင်းငှါ၎င်းစွဲကုသနေကြသည်။
ဤအ Self-အစီရင်ခံစာများတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ် porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှု, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနေသောခေါင်းစဉ်:
လိင်အကျင့်စွဲသူ (အသက် ၃၅ နှစ်) - လွန်ခဲ့သောညကအမည်မဖော်လိုသောလိင်ကိုရှာဖွေနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ဒါနဲ့ငါအွန်လိုင်းပြန်ရ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အမည်ဝှက်ချိတ်ဆက်ရန်ရှာနေသည်။ သူမကကျနော့်ကိုလာခေါ်ခိုင်းတယ်။ လမ်းခရီးမှာသူမကကျွန်တော့်ကိုစာပို့ပြီးပီဇာကိုယူခိုင်းတယ်။ WTF? ၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်အမည်မဖော်ဘဲအသစ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအလားအလာသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်များပြားနေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လုယက်ခံရမည်ကိုကြောက်။ သူမအားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်မှအလင်း မှလွဲ၍ တံခါးဖွင့ ်၍ အတွင်း၌အလွန်မှောင်မိုက်နေသည်။ ငါသူမကိုတကယ်မမြင်နိုင်ဘူး၊ သူမက“ ငါဝတ်ထားတာကိုကြည့်ပါ ဦး ။ Sexy မဟုတ်ဘူးလား” ဒါပေမယ့်နက်ရှိုင်းတဲ့အသံထဲမှာ ... ဒါဟာ dude ပဲ! ပြီးတော့သူက "ဒါအဆင်ပြေရဲ့လား?" ငါကသူ့ကိုကြင်နာမှုဖြင့်ပီဇာကိုဝယ်ပြီးထိုနေရာမှထွက်ခွာသင့်သည်ဟုထင်နေသည်။ နောက်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းတွင်တစ်ယောက်ယောက်ရွေ့လျားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားရသည်။ ငါစူပါကြောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာသည်။ ဒရာမာဇာတ်လမ်းများနှင့်မဆက်ဆံရသည့်အပြင်ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ကျန်နေသည့်အတွက်ပျော်ရွှင်ရသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးပြီးအိပ်တော့မယ်။
Porn စွဲ - စွဲလမ်းမှု - ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်တွင်လိင်ဆက်ဆံရန်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်တော်ဟာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ ၆ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်တော့်ဘဝမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လေးယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးသူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုအော်ဂဇင်မရောက်ခဲ့ဘူး။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးသည်စိုက်ထူခြင်းပြendedနာများကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုလိင်တူချစ်သူလို့စွပ်စွဲခဲ့တယ်။ ဒါကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူမကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲ။
Porn စွဲ (အသက် ၂၅ နှစ်) - လိင်စွဲလမ်းသူဖြစ်နိုင်သော်လည်းလိင်စွဲလမ်းနိုင်သူလား။ ငါသည်ငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်, မစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနိုင်ဘူးငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံပြီးရင်ငါကပိုပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲတယ် တစ်ခါတစ်ရံမှာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ပါတ်လောက်သာအသက်ရှင်နိုင်သည်။ ငါသည်လည်းကလေးဘဝညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ငါအတိတ်အမှတ်တရများမှလွတ်မြောက်ရန်လို့ထင်ပါတယ်။ SLAA အစည်းအဝေးမှကျွန်ုပ်သိသောလိင်စွဲလမ်းသူများစွာသည်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအလွဲသုံးစားပြုသူများဖြစ်ကြသည်။ တခါတရံများများစားစားမသောက်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲမက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါသည်ငါ့ porn အသုံးပြုမှုအကြောင်းကိုအရှက်ကွဲခြင်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပက်ထရစ်ကာနက်စ်ကလည်းလိင်စွဲလမ်းသူများ၏အဓိကယုံကြည်ချက်မှာ“ ငါ့ကိုသိသကဲ့သို့ငါ့ကိုသိလျှင်မည်သူမျှငါ့ကိုမချစ်ကြ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်မမှန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပြီး၎င်းကြောင့်ထိုအရာများမှမည်သည့်ဆိုးကျိုးကိုမျှမခံစားခဲ့ရပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူတွေအကြားမှာပြandနာတွေရှိနေတယ်၊ ​​ကျွန်တော်သိပ်ပြီးမယုံနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကွန်ပျူတာရှေ့မှာရှေ့မှာထပ်မံငွေဖြည့်ခြင်း၊ ငါ့အတွက် porn သည်အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်နှင့်ပြတ်တောက်ရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးယာဉ်ဖြစ်သည်။ ငါဟာလိင်စွဲလမ်းသူလို့မထင်ပါဘူး။
ဤတွင် porn စွဲလိင်စွဲလမ်းရာမှမတူအချို့နည်းလမ်းတွေနေသောခေါင်းစဉ်:
၁။ လိင်စွဲလမ်းမှုသည်တကယ့်လူများဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ Porn စွဲသူများသည် pixel များ / ရှာဖွေမှု / စဉ်ဆက်မပြတ်အမြင်အာရုံအသစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိင်စွဲသူများသည် ၀ တ္ထုအသစ်များ၊ voyeurism၊ frottage, flashing, risky sex စသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ porn သည်အခြားအပြုအမူများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
၂။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုထက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အခြားလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မကူးစက်စေပါ။ အမှန်မှာ၊ လေးနက်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးများပင်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများမဖြစ်သင့်ပါ။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူကိုလိင်စွဲလမ်းသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကaWarcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလား တစ်ဦး Las Vegas မှ High-roller ဖို့စိတ်အားထက်သန်။
၃။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲစွဲသူများသည်အမြဲတမ်းရည်းစားထားလိုကြသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်။ လိင်စွဲမိတ်ဖက်အမျိုးမျိုးချင်တယ်။ သူတို့ကဝတ္ထုကလူထက်ဝတ္ထု pixels ကိုအပေါ်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
၄။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြwနာများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအတွက်အများအားဖြင့်တိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်စွဲသူများအကြားပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများအကြောင်းမကြားရပါ။
၅။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလများအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းတိုးပွားလာသည် ပြီးနောက် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် switching ။
အချုပ်အားဖြင့်လိင်စွဲလမ်းသူအားလူနေမှုဘ ၀ ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပြီးညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူယောက်ျားသည် 3-D လှုပ်ရှားမှုတွင်အများအားဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ အများအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ” ကိုပြသည်။ ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းအခြေအနေပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာလဲ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း: တစ်အရှိဆုံး သဘာဝမကျသော သဘာဝကစစ်ကူ
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များတွင်အစားအသောက်နှင့်လိင်နဲ့တူဗလာဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်အလွန်အချို့တို့ကပူးပေါင်းပြီ သဘာဝမကျသော ဆွေမျိုးသားချင်း။ ဤရွေ့ကား imposters ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလိုက်ရန်ပြောင်းလဲသဘာဝဆုလာဘ်အဖြစ်အတူတူပင်အာရုံကြောအစပျိုးခြင်း trip ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ limbic ဦးနှောက်သူတို့ကိုမချစ်ကတညျးကသူတို့အားနည်းချက်များလျစ်လျူရှုရန်နာမယူဘဲနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မရေမတွက်နိုင်သောစျေးပေါ၊ အရသာရှိပြီးအဆင့်မြင့်သောကယ်လိုရီများသောအစားအစာများကိုတင်ပြထားပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောအမေရိကန်လူမျိုး ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဝလွန်ကြပြီး ၃၀ ရာနှုန်းခန့်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများခံစားရစေကာမူဤအစာအာဟာရကိုစွဲလမ်းစေသည်။ "စွဲ" တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်း ဒီနေရာမှာ ဥပမာတစ်ခု မဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ၏ ဦးနှောက်သည် တူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းများဖြင့် ပြောင်းလဲသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လိင်လှုံ့ဆော်မှုများသည်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်တစ်ဒါဇင်ဝက်ခန့်မြန်ဆန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသူများသည်အခမဲ့ဖြစ်သောအမြဲတမ်းအွန်လိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုစားသုံးနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အမှိုက်များကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်လူ့သမိုင်း၏ထူးခြားသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ရလဒ်? ယောက်ျားလေးများတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအွန်လိုင်းအသုံးပြုခွင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့သုတေသန စုဆောင်းဒေတာ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်ကကောလိပ်ကျောင်းသားယောက်ျား ၁၀ ယောက်အနက် ၉ ဦး သည် (အမျိုးသမီးသုံးပုံတစ်ပုံခန့်) သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုပုံစံဟောင်းများသည်ဓာတုပစ္စည်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည် supernormal ဗားရှင်း အစားအစာနှင့်လိင်၏အများစုကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးလိင်စွဲလမ်းရှားပါးဖြစ်ကြောင်းနေဆဲဆုံးမသွန်သင်ကြသည်နိုင်အောင်။
အိုအွန်လိုင်းဖိုရမ်များကမည်သည့်ညွှန်ပြချက်မှမပါလျှင်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည် (၁) သူတို့မတတ်နိုင်ဟုတိုး။ ညည်းညူကြသည် ရပ် (2) ကပုံမှန်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအတူရောက်စွက်ဖက်သည်ကိုကြည့်ရှုခြင်း, ချိန်းတွေ့ နှင့် မိတ်လိုက်စွမ်းရည်များ။ ယနေ့ခေတ် အွန်လိုင်း erotica အသုံးပြုသူ မည်မျှ စွဲလန်းလာသည်ကို မည်သူမျှ အမှန်တကယ် မသိနိုင်သော်လည်း ဆယ်ကျော်သက်များတွင် အင်တာနက် စွဲလမ်းမှုနှုန်းမှာ ခုန်တက်သွားပါသည်။ တစ် ဟနျဂရေီလေ့လာမှု မကြာသေးမီကငါးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တဦးတည်းပြီးသားစှဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ (ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ.)
ငါတစ်ခုတည်းကိုသာအမြင်အာရုံဆွ-မပါဘဲမှာအားလုံးငါ့လက်ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူအော်ဂဇင်ရဲ့ချောက်ကမ်းပါးမှစာသားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သဘောပေါက်လာတယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲ arousal ထုတ်လုပ်ရန်ကြှနျုပျမကျြစိဖွငျ့ကကျွေးမွေးအစွန်းရောက်ပုံရိပ်တွေအပေါ်မှီခိုသို့ rewired ခဲ့သည်။ -အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းနှုန်းသည်ယခုလူအများအပြားတွင်အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထက်ကျော်လွန်သွားနိုင်သလား။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ ဦး နှောက်သည်အစားအစာအတွက်ထက်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် dopamine ကိုပိုမိုလွှတ်ပေးသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်း Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့အပြင်အစားအစာစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ထားသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုမူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သူမျှအဆီမဖြစ်လိုသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုနေ့စဉ်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းသည်“ လိင်စွဲလမ်းမှု” မျှသာမဟုတ်ပါသနည်း။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပုံရသည်။ ဒေါက်တာကာနစ်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာလေ့လာခဲ့သည်။ သူ၏လက်ရာများအရကလေးငယ်များအနေဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်လျစ်လျူရှုခံရခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ အနှောက်အယှက်ပေးခံရခြင်း၊ မုဒိမ်းပြုကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံခြင်းခံရသူများသည်လိင်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာမဆင်မခြင်လိင်၊ ) ။ သူတို့သည်လိင်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာမခံစားနိုင်ခြင်းနှင့်စိတ်မသက်မသာခံစားရခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုဆေးကုသရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုသူကို porn အသုံးပြုသူများသည် ကြှနျုပျတို့၏ website မကြာခဏသူတို့သည်ဤစွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူများအဖြစ်သတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ Carnes ၏စံပြပုံစံတွင်လိင်ကိစ္စသည်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်နှင့်သူတို့၏ဘ ၀ များနှင့်ကျန်းမာသောပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်အများစုသည် ၂ လမှ ၄ လအတွင်းညစ်ညမ်းသောအားနည်းခြင်းကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများမှပင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများသည်အလွန်ဆိုးရွားနိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ယောက်ျားအများစုသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းမှုမတိုင်ခင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအဆင့်များသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။
လိင်စွဲထုတ်ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲများနှင့်မကြာခဏအန္တရာယ်ဖမ်းဆီးသို့မဟုတ်ရောဂါအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ porn အသုံးပြုသူများကိုသာပြင်ဆင်ချက်အရသူတို့ရဲ့အစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်ဖန်သားပြင်ကိုထိပုတ်ပါရန်ရှိသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အများဆုံး အချို့အသက်အရွယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောယောက်ျားတွေမသက်ဆိုင်ဘဲမူလကလေးဘဝ-စိတ်ဒဏ်ရာပရိုဖိုင်း၏, အတော်လေးကြီးကြီးမားမားအများအပြားကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, အသုံးပြု. ရသည်။ ဿုံကျန်းမာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို (နှင့်အထက်) ဦးနှောက်ရှိပါတယ် သဘာဝကျကျဆွဲဆောင် အင်တာနက် porn ၏အံ့အားသင့်စရာ၊ အသစ်အဆန်း၊ လိင်မှုနှင့်မရပ်မနားအခမဲ့ရရှိနိုင်သောအလွန်တရာလှုံ့ဆော်မှုပေါင်းစပ်ရန်။
ပုံမှန်မိုးသည်းထန်စွာရွာသူရွာသားများသည် Carnes ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းသူများဖော်ပြချက်နှင့်မကိုက်ညီတော့သော်ငြားလည်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်၎င်းတို့အပေါ်မှီခိုသောစာနယ်ဇင်းသမားများသည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူစွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်စွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် (အတော်လေးရှားပါးသော) စဉ်းစားခြင်းသည်၎င်း၏မြင်သာမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ကျွမ်းကျင်သူတ ဦး ကလိင်စွဲလမ်းမှုမှာရှားပါးသောကြောင့်အင်တာနက်အပြာအပြာအပြာစွဲစွဲမှုဖြစ်ပွားမှုသည်“ အလွန်နည်းပါးသည်” ဟုကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ချစေခဲ့သည်။ ဟမ်လား
ကျွမ်းကျင်သူများ၏အဆိုအရအင်တာနက်စွဲစွဲသူများ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းနှင့်မကိုက်ညီသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည် မပေးနိုင် အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့သူတို့ယုံကြည်လျှင်ပင်, စွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကျွမ်းကျင်သူများက porn စွဲသာတချို့၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းနိုငျကွောငျးအပြင်းအထန်တောင်းဆို အခြား ရောဂါ (ထိုကဲ့သို့သောလိင်စွဲ, ADHD, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်) ။ ၎င်းသည်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲကပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအောက်တွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ယင်းကအဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားကာ“ တရားမျှတသော” ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများကိုအအေးမိနေစေနိုင်သည်။
အလွန်နည်းသောဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံရှိသောဆယ်ကျော်သက်များအကြား“ ရင်းနှီးမှုပြissuesနာများ” သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမည်သို့ရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။ ဤလူငယ်နုပျိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ရည်းစားများကိုဆွဲဆောင်သည် သူတို့၏လိင်တံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာကြည့်။ ယောက်ျားများကိုမတုံ့ပြန်သောကြောင့်သူတို့စိတ်ရှုပ်သွားသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ သူတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စများနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ထိုကဲ့သို့သောမစုံလင်သောယုတ္တိဗေဒ၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်ကိုယ်နှိုက်ပေါက်ကွဲခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်နောက်ကျကျန်နေသည်။ စိတ်ပညာရှင် Philip Zimbardo ၏ TED ဟောပြောချက်ကိုရရှိရန်အတွက်“ နှိုးဆွသောစွဲလမ်းမှု” သည်အလုံအလောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို။ "
ကံကောင်းထောက်မစွာ, လူသားရဲ့အနာဂတ်သာယာဝပြောရေးအဘို့, စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society မကြာသေးမီကစွဲနေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် မူလတန်း ရောဂါ။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဦးနှောက် changes-မသက်ဆိုင်ကလေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းလက်မခံနိုင် / လက်ခံနိုင်ဖွယ်တွေ့ကြောင်းအပြုအမူအတွက်စှဲလမျးသူထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါကဖြစ်စေမ.
အောက်ခြေလိုင်း: လိင်စွဲလမ်း၏ etiology အများဆုံးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲ (အချို့လိင်စွဲဆက်ဆက်ပိုလျှံမှ porn ကိုသုံးခြင်းနှင့်အချို့ညစ်ညမ်းစွဲကလေးဘဝကိစ္စများရှိပေမယ့်) ၏ etiology နှင့်ဆက်စပ်သောမပေးပါ။ အသုံးပြုမှုစတင် Over-စားသုံးမှုသညျ့လှုံ့ဆော်၎င်း၏ Goodies, (1) သဘာဝကျကျတွန်းလှန်အဖြစ် supernormal လှုံ့ဆော်မှုရိပ်မိကြောင်းဦးနှောက်နှင့် / သို့မဟုတ် (2) ၏ (3): porn စွဲအစားအသောက်စွဲဖွံ့ဖြိုးတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအခါဦးနှောက်အထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါသည် နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အသစ်အဆန်းရှာအများဆုံးကွေး။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” နှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း” တို့ကပpornိပက္ခများကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖုံးကွယ်ထားသည်
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လူငယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း” ကို“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” နှင့်ခွဲခြားရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများ (သက်ကြီးရွယ်အိုများ) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အကူတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ လူငယ်မျိုးဆက်များသည်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမသိပါ။ ၎င်းတို့သည်ဝက်ဘ်၏အစွန်းရောက်မှုအသစ်နှင့်မကြာခဏထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်များကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ များစွာသောသူတို့သည်အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိခဲ့ပါ။ ဒီလူငယ်ရဲ့အံ့သြဖွယ်စမ်းသပ်မှုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားဖူးသောအရာ (porn porn ကိုအမြဲသုံးသည်) - လုံးဝမတူသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိင်တူချစ်သူများအားကြိုးစားသည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြူဖပ်ဖြန်းဖြဲပြန်ရိုက်လိုက်သည်။
နှစ်ခုအတွေ့အကြုံများစှာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ငါမဘတ်ဇ်, အမြင်မရှိပြောင်းကုန်ပြီလို့အော်ဂဇင်မှဖွင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, ဇာတျသိမျးမှာနီးပါးတုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာချိုမြိန်, ညျခှနျအားခံစားမှုဖြစ်ထွက်လှည့်။
ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်ခံစားခဲ့ရကဲ့သို့ခံစားရတယ်သောအပြည့်အဝ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း session ကိုအစပျိုးခဲ့ကြပေမည်။ ရုပ်ပုံတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုတုန်ခါနေသောပေါက်ကွဲခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သိသော“ dope surge” သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်မှသည်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်မှဖြတ်သွားသည်။ အရာအားလုံးထက်ပိုပြီးကြားသိခံစားရတယ်။ အော်ဂင်စတင့်ကိုကြည့်မိတော့တိမ်တိုက်တွေကငါ့အပေါ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်။ ဒီထုံနောက်ဆုံးခံစားမှုကအနည်းဆုံးနှစ်ရက်ကြာခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောဆက်သွယ်ရေးကွာဟမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်တွင်အောက်ပါဇာတ်လမ်းကိုထပ်ခါတလဲလဲကြားရသည်။ ပုံမှန်စိုက်ထူမှုမပြုလုပ်နိုင်သောလူငယ်တစ် ဦး သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သည်။ အကယ်၍ သူသည်မိမိတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (“ နေ့စဉ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုသည့်နာရီများ”) ကပြproblemနာကိုဖြစ်စေသည်ဟုပင်ထင်လျှင်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်က“ တစ်ကိုယ်တည်းလိင်မှုကိစ္စ” (subtext“ ကောင်းသောခေတ်ဟောင်းတစ်ကိုယ်တော်လိင်”) သည် ED (သို့မဟုတ်သင်၏အခြားစွဲလမ်းမှု) ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ - ရောဂါလက္ခဏာများကဲ့သို့) ဒါကြောင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကမင်းရဲ့ပြproblemsနာကိုဖြစ်စေတယ်။ ဤတွင် Cialis ဆေးပြားအချို့နှင့်လိင်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး အားရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်လေးကသူထွက်သွားတယ်၊ သူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရောဂါမရှိဘူးလို့ယုံကြည်သွားတယ်။ အသုံးမပြုခဲ့ရင်သူဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်သူပြproblemနာကိုပိုဆိုးစေတယ်။
ပညာရှင်များသည်တစ်နည်းအားဖြင့်မှန်ပါသည် - အင်တာနက် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်စွဲလမ်းမှုသည်ရှားပါလိမ့်မည်။ ဒီနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာထက်ပိုသည် ၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို tabs အမျိုးမျိုးဖြင့်ရှာဖွေခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောမြင်ကွင်းသို့မြန်ဆန်စွာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအများကြီးပိုပါတယ် neurochemically seductive, မျှသာတစ်ကိုယ်တော်လိင်ထက်စစ်ကူ။
ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အော်ဂဇင်၏ဆုလာဘ်ထက်ကျော်လွန်သည်။ ယောက်ျားများသည်အလုပ်ခွင်၌ကြည့်ရှုခြင်း၊ သူတို့၏ဖုန်းများ၌ကလစ်များမျှဝေခြင်းကိုအထွto်အထိပ်သို့ရောက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ လေယာဉ်ပျံများတွင်ပျံ, ဒါမှမဟုတ် surfing စဉ် edging ၏နာရီအတွင်း။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကရှုပ်ထွေးမှုများသည်အဓိကကျသည့်အချက်ကိုလျစ်လျူရှုထားသည့်အမှားအယွင်းများမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အော်ဂဇင်သည်သဘာဝဖြစ်ပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်စွဲလမ်းခြင်းကိုမရဟုမှန်ကန်သောယူဆချက်ဖြင့်စတင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အော်ဂဇင်တစ်ခုထက်အာရုံကြောဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်မှုမရှိနိုင်ဟုထပ်မံယူဆထားသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်စွဲလမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်ထားသည်။
ဒီမှာအမှားပါ။ စွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် မဟုတ် dopamine သက်ရောက်မှု၏ပြင်းအားမှချည်ထားလေ၏။ ဥပမာအားဖြင့်စီးကရက်များသည်၎င်းတို့ကိုကြိုးစားသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုချိတ်ထားသည်။ ဘိန်းဖြူသည်လူနည်းစုသာသုံးစွဲသူများသာဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာစီးကရက်၏ dopamine သက်ရောက်မှုသည်ဘိန်းဖြူရိုက်ခတ်မှု၏ dopamine အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ စီးကရက်၏ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုသည် dopamine ထိမှန်မှုနှင့်အတူ ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ယင်းကြောင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုစွဲလမ်းစေသည့်၎င်းတို့၏စွမ်းအားကို၎င်းတို့၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒသက်ရောက်မှုဖြင့်တိုင်းတာ။ မရပါ။ ဤအချက်သည် David Linden ၏စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည် ပျော်ရွှင်မှု၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်.
လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဘိန်းဖြူစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်တူဖွယ်ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာလူတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်မျှကြာအောင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ထားပြီး၊ စွဲလမ်းသူသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒတည်ဆောက်မှုလိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်။ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောပုံသဏ္novelာန်တစ်ခုစီသည်သေးငယ်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော dopamine burst ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် puff တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူဘဲ ဦး နှောက်ကိုအပြုအမူထပ်လုပ်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်၊ အော်ဂဲနစ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးသော်လည်း၊ ပိုအစွမ်းထက်ချိတ်သည် အစဉ်အဆက်-ရရှိနိုင်အသစ်အဆန်း အင်တာနက် porn ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူ၏ ဦး နှောက်ကို“ reboot” လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ထိုအတွေ့အကြုံမှာတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ငါသည်ဤ reboot စဉ်အတွင်း porn တချို့ခိုင်မာတဲ့ရမ္မက်ဖူးသော်လည်းငါ masturbate ဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောငါ၏ဦးနှောက်ကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်လွဲချော်ထက်ပိုညစ်ညမ်းလွဲချော်ကြောင်း, အများဆုံးကိုရည်မှတ်အရာဖြစ်၏။
ဒီနေ့ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူသည်အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်။ သူ (သို့မဟုတ်သူမ) သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအစဉ်အမြဲပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်မှုများမှဒိုင်မင်နီအဆက်မပြတ်ထိမှန်မှုအပေါ်မှီခိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကဲ့သို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အားစိုက်ထုတ်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်ရှာရန်မလိုအပ်ပါ။ သူသည်အစားအသောက်စွဲလမ်းသူနှင့်ပိုတူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အလွန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောဖြန့်ဝေမှုကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်လည်ထုတ်ယူသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
တစ်ဦးက virtual world ထဲမှာသောင်တင်
porn စွဲလမ်းလိင်အပေါ်ချိတ်ဆက်ကြသည်မဟုတ်, သူတို့ကအင်တာနက် porn ကိုချိတ်ဆက်ထားတယ်။ သူတို့ဟာလိင်ကိစ္စအတွက်လေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ဤမှတ်ချက်များသည်သုံးခု၏မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ငါ၏ရှေ့မှောက်၌အဝတ်အချည်းစည်းရပ်နေအစစ်အမှန်ဘဝမိန်းကလေးတွေအတွက်အနိုင်နိုင်ငါ့ကိုစိုက်ထူတယ်သောအခါငါဒုက္ခ၌ရှိ၏သိတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကျွန်မကွန်ပျူတာပေါ်မှာခုန်ချနဲ့ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ရော့ခ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အချို့အရူး porn မျှော်ကြည့်။
[ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရိုက်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်များ] ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကထူးဆန်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်နေတုန်းငါဟာအခြေခံအားဖြင့်လိင်ခြားသူတစ်ယောက်ပါ။
ငါဟာအနှစ် ၄၀ အရွယ်အပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့နှစ် ၃၀ ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုချိုးဖျက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ငါအသက် ၁၂-၁၃ နှစ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်း (မထိုက်မတန် / ကြွက်သားအမျိုးသမီးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြီးမားသော Boobs) ။ ငါမိန်းမအများအပြားနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများရှိခဲ့ပေမယ့်ပြည့်စုံ dud ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဖျော်ဖြေရန်နောက်ထပ်ကျရှုံးမှုတစ်ခုရှိပြီးနှစ် ၃၀ အကြာတွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြနာကငါနှင့်မှန်ကန်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်“ သင့်တော်သော” ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းကိုတောင်ဘယ်တော့မှတီထွင်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိဟုထင်သည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန်လွန်စွာဟောင်းနွမ်းနေသောလမ်းကြောင်းလည်းမရှိ၊ ဘယ်တော့မှမတည်ရှိခဲ့ဘူး ကျွန်ုပ်သည် ၃၃ ရက် porn / masturbation အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လက်ရှိလမ်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ငါခြေမဘယ်တုန်းကမှမခြေလှမ်းခဲ့ရတဲ့တောနက်ထဲမှာဝိုင်းရံနေသလိုခံစားရတယ်။ ငါမှာခန္တာကိုယ်တောင်မပါဘဲငါဟာတကယ်ကိုငါကိုချဉ်ပေါင်နဲ့ဘူဒိုဇာလိုတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုလုံးဝနီးပါးမမြင်ရသေးသမျှကာလပတ်လုံးရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေသောအသုံးပြုသူများသည်မရေရာသောအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ သူတို့ဟာအရာရာကိုသူတို့ဘာသာတွက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါက porn-induced အစက်အပြောက်တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့မလွယ်ဘူး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာများ (သို့မဟုတ် porn-related စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ) နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့အစွမ်းထက် aphrodisiac ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသုံးပြုသူခံစားစေသည် ပိုကောင်း ကြည့်နေစဉ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏လက္ခဏာများအားအခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖော်ပြကြသည်၊ သို့မဟုတ်“ ဤသူကားငါပင်ဖြစ်သည်” ဟုရိုးရိုးလေးသာကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောစာနယ်ဇင်းသမားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသူများစွာကိုမလိုအပ်ဘဲကြာရှည်စွာခရီးထွက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ကလေးသူငယ်ပြissuesနာများကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းကြောင့်ပိုမိုသိသိသာသာအကူအညီလိုအပ်သူများသည်“ ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့သော” ကွန်ယက်တွင်ဖမ်းမိခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုလူသားများမဟုတ်ဘဲပစ်ဇယ်များဖြင့်ကြိုးတပ်ဆင်နေကြသည်။ အချို့သူများသည်စစ်မှန်သောလိင်မအောင်မြင်ခြင်း၊ ဤသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်နွေးနွေးထွေးထွေးစပြုလာစေရန်အပြည့်အဝစွဲလမ်းသောစွဲသူများဖြစ်လာသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။
နှစ်ပေါင်းများစွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြfromနာများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု PMO ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သံသယရှိခဲ့ပေမယ့်သူကရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲကြောင်းအမြဲခံစားရတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည် ၃ လခန့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ ငါကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ချိန်းတွေ့တယ်၊ ပြီးတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်။ သို့သော်…ဘာပဲအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပျင်းခြင်း…သို့မဟုတ်အလေ့အထ…ငါပြန်ဖြစ်သွားသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်ကတည်းကယခုအချိန်အထိရုန်းကန်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက်တွင် PMO အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လှည့်မကြည့်ပါ။
နှစ်ပတ်အကြာမှာတော့ငါဟာစိုးရိမ်စိတ်တွေလျော့နည်းလာပြီ၊ ယုံကြည်မှုပိုကောင်းလာတယ်၊ အသံပိုကောင်းလာတယ်။ ငါပုံမှန်ဖြစ်လာပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါထင်ထားသည့်လူလိုပဲ အမျိုးသမီးများကကျွန်ုပ်ကိုထပ်မံသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်နှင့်သူတို့နှင့်အမှန်တကယ်စကားပြောဆိုနိုင်သည်။ ငါဟာယေဘုယျအားဖြင့်လူတွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုလိုခံစားရတယ် ငါတောင်မှအားကစားပိုကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေနေပါတယ်။ ငါပိုမိုအားကောင်းမြန်ဆန်နှင့်ပြတ်သားခံစားရတယ်။ ဒါဟာမြူရုပ်သိမ်းပြီကဲ့သို့ဖြစ်၏! ကျွန်ုပ်သည် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ရရှိသောစွမ်းအင်ရှိသည်ဟုခံစားရ၏။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကကျန်တဲ့တစ်သက်လုံး PMO အခမဲ့ဖြစ်ဖို့ပါ။ ငါခံစားရအရှိန်အဟုန် PMO ဆောင်သောစျေးပေါစိတ်လှုပ်ရှားထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ငါအသက်ရှင်နေသေးတယ်နှင့်တော့ဘူးပုန်းရှောင်မရ။ ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရသည့်အရှိဆုံးလွတ်မြောက်မှုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကအချိန်ကိုကြည့်သည်လမ်း, သင့်တဲ့လိင်စှဲလမျးသူဆိုပါကသင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပျော်မွေ့, အဘယ်ကြောင့်ရပ်တန့်? ယင်း၏သင့်ရဲ့တစ်မိုက်မဲကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်ဘယ်မှာ porn စွဲမကြိုက်ဘူး။ သင့်ရဲ့ fuking အစစ်အမှန်ဘဝအမျိုးသမီးတွေ! သင်မည်သူကိုချစ်!
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါ့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဘဝအတွက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲနေသူတစ် ဦး အနေနဲ့အခုထိဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံဖူးဘူး။ လိင်စွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတာငါတောင်မှစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ ။ ငါဒီနေရာမှာစိတ်ကူးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ် အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး
အရမ်းငါ့ကို lol !!!
အခုအချိန်မှာငါလိင်စွဲစွဲလမ်းမှုဟာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမှာလိင်မှုကိစ္စကိုသွေးဆောင်တဲ့ ED မရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေလို့ပဲ။ သို့သော်အဖြစ်မှန်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်တူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် - လိင်သည်သင်၏အတွေးများကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လိင်တူတူလိင်တူသူတစ် ဦး နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိပါကအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်, ငါကငရဲကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံပါဘဲ။
သငျသညျယောက်ျားတွေငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိလိုလျှင်, တကယ်မခဲယဉ်းဘူး။ ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်ပြတ်သွားတယ် အလေးအနက်ထား, ထိုကယူအားလုံးပါပဲ။ နွေရာသီမှာကျွန်တော်ဟာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါလုပ်မိပြန်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလက်တော့ပ်ပေါ်ကနေငါအိမ်ပြန်သွားပြီ။ ငါမှန်တယ်။ ငါလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်း၌ငါအသစ်တစ်ခုကို PC လာပြီဖော်ပြခြင်းငှါမ။ ထပ်မံခံယူချက်ကိုရယူပါ။
PORNFREE ON Threading လင့်ထားသည်: သင့်ရဲ့အဆိုးဆုံး, ညစ်ညမ်းလောင်စာဆင်းရဲသားကိုရွေးချယ်မှုကဘာလဲရှိသနည်း
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 40 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 20 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။